-Dị ahịhịa Korea nke eghe eghe osikapa, usoro esi nri | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | North Korea, Gastronomy
Otu ụzọ njem bụ nwaa nri ndi ozo. Nri nke mpaghara ma ọ bụ mba ndị ọzọ na-ebuga anyị na mbara igwe. Ọ bụ njem nke nchọta. Tupu ịkwaga ịkwaga iri nri dị iche iche mana taa ụwa jikọtara ọnụ. Yabụ, nri dị iche iche na-eme njem naanị ma dịka n'akụkụ Spain anyị nwere ike iri nri ndị Korea, n'otu akụkụ nke Seoul anyị nwere ike iri Spanish churros, dịka ọmụmaatụ.
Ihe jikọrọ nri Asia bụ osikapa. Asianu na eri osikapa na uzo di iche iche.. Otu n'ime ụzọ bụ site ighe ya, yabụ osikapa eghere eghe n’Eshia dịka achịcha ebe a. Yak ikpep iban̄a kedu korean style shrimp eghe osikapa, otu n'ime ọtụtụ ụdị dị iche iche.
1 Eghe osikapa
2 Nri Korea
3 Koreandị ahịhịa ndị Korea na-eghe eghe
Otu jikoro osikapa eghe na nri ndi China na nwere mmalite ya na China kpomkwem. Ọ bụ ezie na amabeghị ya kpọmkwem mgbe ọ pụtara, a na-eme atụmatụ na ọ bụ n’oge ọchịchị nke usoro ndị eze Sui (589 - 618 BC), na mpaghara Jiangsu.
Dị ka ogologo oge gara aga, osikapa bụ isi ihe ọkụkụ, a na-eri ya n'oge niile na nke a mụrụ site na-eji ngwakọta nke ihe eji eme ihe, ihe dị n'aka, ihe fọdụrụ na nkwadebe ndị ọzọ.
Ke ofụri ofụri e ghere eghe osikapa a na-eme ya na wok, arịa nke ọdịnala ọdịnala dị n'Eshia nke amụrụ na China ma gbasaa oge ruo n'akụkụ ndị ọzọ nke Eshia na ndịda ọwụwa anyanwụ nke mpaghara a. Iji wok, ị nwere ike ọ bụghị naanị ighe nri kama ị ga - esi ya, sie ya, sie ya ike, sie ya na ọtụtụ ndị ọzọ.
Eghe osikapa ọ na-sie mbụ na dị nnọọ mgbe ahụ ọ na-agwakọta ya na wok na ihe ndị ọzọ nke ahụ nwere ike ịdị iche akwụkwọ nri, anụ, azụ ma ọ bụ azụ azụ. E nwere ọtụtụ osikapa rito na ọ bụ efere na-aga n’ihu na-agbanwe ka ọ na-anabata ọdịnala ndị ọzọ.
Iji mee osikapa ọ bụla e ghere eghe kachasị mma esi nri osikapa otu ụbọchị tupu ma zụọ ya na friji ma ọ bụ mee ya na osikapa osikapa site na nri ọzọ. Echiche bụ na ọ bụghị esi nri osikapa ọhụụ n'ihi na mkpụrụ ọka ahụ ka nwere oke mmiri ma ọkụ nke wok ga-eme ka esi esi nri.
Mgbe m hụrụ ntụziaka maka osikapa eghere eghe, nke ọ bụla n’ime ha na-etinye mmanụ na-enweghị n’ụlọ, mgbe niile, yabụ ndụmọdụ m bụ ịgagharị na Chinatown ma zụta sesame ma ọ bụ mmanụ ahụekere, n'ihi na ọ na-enye mmetụ pụrụ iche nke oliv ma ọ bụ mmanụ sunflower enweghị.
Na nke ahụ kwuru, ka anyị hụ ihe nri korean n’ime ya, ọ bụ ụdị Korea eghe osikapa.
Nri Korea enweghị akụ na ụba ma ọ bụ oge ochie nke China, mana ruo oge ụfọdụ ọ na - amalite ịwe otu ebe n'etiti nri ndị Asia kachasị ama. Amụrụ site na omenaala ndị KoreaE kwuwerị, ọ bụ mba nke na-enweghị ọrụ ugbo kemgbe ọtụtụ narị afọ, ọ dịbeghị anya ọ ghọrọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ọ na-tumadi dabere na osikapa, mkpo, ọka, anụ na akwụkwọ nri Dị ka nri ndị Asia ndị ọzọ, enwere ngosipụta dị egwu n'ọtụtụ na nri dị na tebụl Korea. Ọkacha mma iji mmanụ sesame, fermented bean paste, garlic, fermented chili ose tapawa, na soy ihendori.
Nri Korea nwere ike ịdị nro ma ọ bụ na-ekpo ọkụ na ihe eji eme ya na ụdị efere ya dịgasị iche na obere ala ya. Mgbe kimchi, nke kachasị omenala Korea, echere m na eghe osikapa kacha mma.
A na-akpọ ya saewoo bokkeaumbap ọ bụkwa a mfe efere, maara, nke ọma n'ụlọ, nke onye ọ bụla nwere ike ịkwadebe. Mgbe enwere akwụkwọ nri friji na friji, ihe mbụ nwanyị na-arụ n'ụlọ Korea na-eme bụ bokkeumbap ma kpochapụ ihe niile.
Kedu ụdị ihe m na-ekwu? Garlic, eyịm, carrots, ose nke agba di iche, ero, akwa, zukini, chives, ihe ọ bụla dị na aka. Tinye ụfọdụ n'ime shrịmp (usoro kachasị mfe nke anụ ezi, ọkụkọ ma ọ bụ anụ ehi), ma gbalịa inwe ee ma ọ bụ ee Mmanụ Sesame ma ọ bụghị na ị gaghị na-enwe ahụkarị Asia ekpomeekpo.
Ọzọkwa, ihe na-agbakwụnye n'echiche a, bụ oporo mmiri mmiri ma ọ bụ ihe oriri azụ. Ha siri ike, mana ebe ọ bụ na eji tụlee karama ahụ na-adị ogologo oge.
Lee, ahapụrụ m gị ezigbo na ngwa ngwa uzommeputa site na saewoo bokkeaumbao, Korean-style shrimp eghe osikapa:
3 iko osikapa esi nri osikapa
½ iko nke eyịm eyịm
1 iko oporo (obere ma ọ bụ nnukwu)
Iko obere akwụkwọ nri ị họọrọ
2 tablespoons oporo ihendori
I ga ebu uzo kpo oku ma obu nnukwu skillet n’elu oku di oku. Tinye mmanụ mmanụ, yabasị, na galik. Sauté maka nkeji ruo mgbe agba aja aja. Ekem tinye oporo na sauté nkeji abụọ ma ọ bụ atọ ruo mgbe ha gbanwere agba ntakịrị.
Tinye akwụkwọ nri na ighe maka nkeji abụọ ma ọ bụ atọ, tinye osikapa ma kpalite nke ọma ijikọta. Na-esi nri nkeji atọ na ise. Mgbe ahụ ị gbakwunye oporo oporo ma gaa n'ihu na-akpali akpali maka di na nwunye ọzọ. Wepu oku ma tinye mmanu sesame, ube ojii oji na chives egbuturu.
Stir na-akpali nke ọma ma ị nweela saewoo bokkembap njikere efere. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ nri dị mfe ma mara nke ọma na ọ bụrụ na ị nwere osikapa ugbua, ọ ga-esi na nkeji iri. Enwere ndị Soro ya na akwa eghere eghe nke a na-etinye n’akụkụ ma ọ bụ n’elu osikapa. Nwere ike ịmalite iche echiche banyere ịnabata enyi, nri?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » North Korea » Koreandị ahịhịa ndị Korea na-eghe eghe
The Himalayas: ụlọ nke ụwa